Dallada SONYO oo beenisay in laga hor istaagay inay Madaxweynaha u gudbiyaan dalabkooda | Somaliland.Org
Dallada SONYO oo beenisay in laga hor istaagay inay Madaxweynaha u gudbiyaan dalabkooda
September 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Dallada dhalinyarada Somaliland ku bahowday ee SONYO, ayaa maanta waxba kama jiraan ku tilmaamay war lagu daabacay wargeyska Waaheen oo sheegayay in Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland uu dhalinyarada Dalladaasi ka horjoogsaday inay madaxweynaha u gudbiyaan qoraal codsi ah.
Sidaasi waxay dallada SONYO ku sheegtay war-saxaafadeed uu soo saaray Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha Iyo Saxaafada Maxamed M. Yuusuf, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Dallada Dhallinyaradda Somaliland ee SONYO waxay shalay si rasmi ah booqasho hawleed ku tagtey qasriga Madaxtooyada JSL halkaas oo ay kula kulantay madaxweynaha JSL, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo.
Kulankan oo Dallada SONYO ay u metelayeen xubnaha Golaha Saree ee SONYO qaar ka tirsan iyo Agaasimaha iyo Madaxa Barnaamijyada SONYO isla markaana ay Dallada SONYO wehelinayeen xubno dhallinyaro ah oo ka tirsan Guddida heer qaran ee u taagan Ololaha Xeer lambar 20 ee da’yartu ku doonayso inay kaga qayb-gasho goleyaasha deegaanka. Sidoo kalena, dhinaca madaxtooyada waxaa kulankaas goob-joog ka ahaa Afhayeenka Madaxtooyada, Xoghayaha Madaxtooyada iyo Xil-dhibaan Golaha Wakiilada ka tirsan oo isna kulankaas goob-joog ka ahaa.
Falanqayn iyo wada-hadal ka dib, madaxweynaha JSL waxaa uu Dallada SONYO u balanqaaday inuu dhallinyaradda Somaliland siin doono ahmiyadiisa koowaad isla markaana xukuumadiisu ku dedaali doonto sidii dhallinyaradda horumarkooda loogu guntan lahaa. Madaxweynuhu waxaa uu ka warramay muhiimadda Da’yartu u leedahay adkaynta iyo taabo-galinta qaranimada JSL iyo ka midho-dhlinta ahdaafta umadeena. Sidoo kalena, Madaxweynuhu waxaa uu balanqaaday in isaga iyo xukuumadiisuba ka qayb-qaadan doonaan oo taageeri doonaan sidii dhallinyaradda looga furdaamin lahaa dabarada sharci ee caqabada ku ah inay qaybtooda ka ciyaaraan hoggaaminta iyo tallada dalka. Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxaa uu si balaadhan u soo dhaweeyey oo uu aqbalay codsi Dallada SONYO u gudbisey oo ku saabsanaa Dhismaha Xarunta Dhallinyarada iyo Daraasaadka ee ay dhowaan SONYO damacsan tahay inay ka hirgaliso magaalada Hargeysa.
Haddaba warkaas uu wargayska Waaheen ku sheegay in Afhayeenka Madaxtooyadu hor-istaagay codsiga SONYO u gudbisey Madaxweynaha JSL waa mid aan sal iyo raad toona lahayn oo ka fog xaqiiqada. Dallada SONYO waxay ka xun tahay in Mareegta Waaheen ku sifawdo mid khalad ka turjunto warkaas ku saabsanaa Kulankaas Madaxweynaha iyo Dhallinyaradda iyadoo saxaafadda inteedii kale ay si baxsan oo xaqiiqada ku salaysan uga warameen kulankaas iyo nuxurkii kasoo baxayba.
Ugu damebyn waxaanu Waaheen kula talin lahayn inay ka waantawdo tarjumada khaldan ee ay ku lifaaqday warkeeda, si ay u ilaashato dhex-dhexaadnimadeeda iyo sumcadeeda xirfadeed ee saxafadeed.
Previous PostXisbiga Ucid Oo Sheegay Inay Aadan Waqaf Ku Dacwaynayaan Lacag Uu Kala Baxay QasnadoodaNext PostWeftigii Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Oo Raashin u qeybiyay dadka ku jira Xerada qaxoontiga ee IFO	Blog